ဘေဘီလေးကို ဒူးရင်းသီး ကျွေးလို့ရလား........... - Hello Sayarwon
ကလေးက အစားစစား တတ်ပြီ။ ဒါဆို အသီးတွေလည်း ကျွေးလို့ရပြီပေါ့။ ဒါဆိုရင် တော်တော်များများ ကြိုက်ကြတဲ့ ဒူးရင်းသီး ရော ကလေးကို ကျွေးလို့ပြီလား၊ လို့ မေးစရာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအဖြေကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးကို ဒူးရင်းသီး ကျွေးလို့ရလား………..
ဘေဘီလေးကို ဒူးရင်းသီး ကျွေးလို့ရလား……….. ဆိုတော့ ကျွေးလို့ရပါတယ်။ အရမ်း အများကြီးတော့ ကျွေးလို့ မရပါဘူး။ ဒီလီုပြောရတာက ဒူးရင်းသီးက အာဟာရပါဝင်မှုများသလို သကြားဓာတ် ပါဝင်မှုကလည်း တော်တော်လေး မြင့်ပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးမှာ ပရိုတင်း၊ ဗီတာမင်တွေ၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ ပိုတက်ဆီယမ်၊ phosphorus နဲ့ သံဓာတ်တို့ ပါဝင် နေပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးက ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ အာဟာရ ကြွယ်ဝပြီး ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပေးတဲ့ အသီးတစ်မျိုးပါ။
ကလေးကို ဒူးရင်းသီး အများကြီး မကျွေးပါနဲ့
ဒူးရင်းသီးက အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပေမယ့် ဒီအမျှင်ဓာတ်က ရေကို အလွယ်တကူ စုပ်ယူနိုင်ပြီး အူတွေ အစာအိမ်တွေကို တင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ကလေးက ဒူးရင်းသီး အများကြီး ကျွေးမိမယ်ဆိုရင် လေပွတာ၊ ဝမ်းချုပ်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးစားပြီး ဗိုက်တင်းနေတဲ့အတွက် တခြားအာဟာရှိတာတွေ စားနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊၊
ဒူးရင်းသီးမှာ နေ့စဉ် လိုအပ်တဲ့ အမျှင်ဓာတ် ပြည့်ဝစွာပါပေမယ့် တော်တော်လေး ကိုက်ဖြတ်ရပါတယ်။ ဒီ အမျှင်ဓာတ်တွေကို ကိုက်ဖြတ်ဖို့ သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ သွားတွေက အပြည့်အဝ မဖွံ့ဖြိုးသေးပါဘူး။ ဒီတော့ ကလေးက ဒူးရင်းသီးကို သေချာ မဝါးမိဘဲ မျိုချလိုက်မယ်ဆိုရင် နင်တာ၊ သီးတာနဲ့ အစာခြေစနစ် ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာစေမှာပါ။
ကလေးက တစ်နှစ် မပြည့်သေးဘူးဆိုရင်တော့ ဒူးရင်းသီးကို လုံးဝမကျွေးတာ အကောင်းဆုံးပါ။ ဒူးရင်းသီးက အစာကြေဖို့ ခက်သလို အနံ့အရသာ ပြင်းတာ၊ သကြားဓာတ် ပါဝင်မှုမြင့်တာတွေကို ကလေးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အသက် ၁ နှစ် မပြည့်ခင်မှာ ဒူးရင်းသီး မကျွေးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း
ကလေးကို အသက် ၁ နှစ် မပြည့်ခင်မှာ ဒူးရင်းသီး မကျွေးပါနဲ့လို့ ပြောရတဲ့ အကြောင်းအရင်း က ကလေးက သွားတွေ စုံအောင်မထွက်သေးဘူး။ တစ်နှစ်အရွယ်မှာ သွားပေါက်မြန်တယ်ဆိုတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့တောင် သွားက ၁၀ ချောင်းပဲ ထွက်မှာပါ။ သွားပေါက်နှေးတဲ့ သားသားမီးမီးတို့ဆိုရင် ၂ ချောင်း ၃ ချောင်းအပြင် ပိုမရှိနိုင်ပါဘူး။
ဒီလို သွားပမာဏ နည်းနည်းလေးက အမျှင်ဓာတ်များတဲ့ ဒူးရင်းသီးကို သေချာ ကြိတ်ဝါးနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ ကလေးက အလွယ်တကူ မျိုချလိုက်ပါမယ်။ ဒီလိုမျိုချတာက လည်ချောင်းမှာ အစာနင်တာ၊ လေပြွန်ပိတ်တာလိုမျိုး ပြဿနာတွေ ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
အသက် ၁ နှစ်အောက် ကလေးရဲ့ လည်ချောင်း၊ လေပြွန်၊ အစာရေမျိုတွေက တော်တော်လေး သေးငယ်ပါသေးတယ်။ ဒါ​ကြောင့် အသက် ၁ နှစ်အောက် ဘေဘီလေးကို အသက်ရှူကျပ်တဲ့ ပြဿနာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ဒူးရင်းသီး မကျွေးသင့်ပါဘူး။
တကယ်လို့ ကျွေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ စားသောက်တဲ့ ပုံစံကို ဆရာဝန်နဲ့အရင်တိုင်ပင်ပြီးမှပဲ ကျွေးသင့်ပါတယ်၊၊
Can babies eat durian? https://howtobehealth.net/2018/05/15/can-babies-eat-durian/ Accessed Date 8 June 2020
When Can Baby Eat Durian? http://toddler-develop.blogspot.com/2018/12/when-can-baby-eat-durian.html Accessed Date 8 June 2020
Can babies and toddlers eat Durian? http://happypinaymommy.com/2019/03/12/can-babies-and-toddlers-eat-durian/ Accessed Date 8 June 2020